Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Statistical Readability Word
Fehezam-boninahitra iray isaky ny manoratra amin’ny vahoaka dia ny ankamaroany dia mamaky amin’ny enina amin’ny faha-enim-bolana amin’ny famakian-teny。 Raha ny ankamaroan’ny Amerikanina sy ny hafa dia mandroso firenena mamaky teny、ny habetsaky ny fahaiza-mamaky boky dia mety miovaova be.
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao。 Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe、fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba haha​​lala ny zavatra lazainao。 Tena mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera、izay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo、ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somary mangatsiaka ihany。 Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
Tsy vitan’ny hoe zava-dehibe ny fijerena ny haavon’ny fanoratanao、fa te haha​​zo tsara ianao fa mora vakiana。 Ny antontan’isa mora vakiana momba ny teny dia fomba iray ahafahana miantoka ireo lahatsoratrao izay tsy vitan’ny fisintonana ny sain’ireo mpamaky rehetra anao、fa ny fitandreman’izy ireo hatrany.
1 マノラトラmba handresena sy hampahafantatra
マノラトラmba handresena sy hampahafantatra
Na dia mahay mamaky aza ny mpamaky anao、tsy midika izany fa tokony ho sarotra ny mamaky ny fanoratanao。 Ny tanjona amin’ny ankamaroan’ny endrika fanoratana dia ny mandresy lahatra na hampahafantatra。 Na izany aza、mety ho sarotra indraindray ny mametraka ny tenanao ao anatin’ny kiraron’ny mpamaky.
Noho ny fahafahanao mahalala ny dikan’ny teny ohatra、dia tsy midika izany fa ny mpamaky no ho tonga saina avy hatrany。 Azonao atao ny mamantatra hoe ahoana no famakiana ny lahatsoratrao miaraka amin’ireo fomba maromaro samihafa.
Mametrakaプラグインmifandraika amin’ny WordPressブログ。 Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra。 Eny sa tsia.
Mangataka fanamarihana ao amin’ny fizarana tsetsatsetsa。ヘビトラtsara izany satria azon’ny mpamaky manome tsipiriany manokana.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoeペーパーレイターPaper Rater ity manaraka ity：
ハマリノny fiandohany。 Mety haha​​soa izany raha manova ny asan’ny olon-kafa ianao ary tsy mahazo antoka raha voadona ilay izy.
Mamaritra ny fahadisoana sy ny fitsipi-pitenenana。 Raha feno fahadisoana ny lahatsoratrao dia mety hisy fiantraikany amin’ny famakiana izany.
最高のは？ Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny写真。 Raha te haha​​zo dikan-doka tsy misy adiresy ianao、dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Mihoatra noho ny azo inoana、dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao。 Na izany aza、azonao atao koa ny manome lalana ny Flesch Read Ease sy Flesch-Kincaid Level Level amin’ny Microsoft Word.
Ampifanaraho amin’ny manaraka ny baiko etsy ambany。 Ireo toro-lalana ireo dia hiasa ho an’ny MS Word 10 sy MS Word 2013.
Kitiho ny safidy（jereo ny sary etsy ambany）
Rehefa vita ny safidy vaovao dia tsindrio eo amin’ny "フィセホアナ" eo amin’ny ilany havia（jereo ny sary etsy ambany）.
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny hoe "Rehefa ny fitsipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny teny" dia tokony hanamarinaボートロア.
Voalohany、Tadiavo Ilay Boaty Manaraka NY "Manamarina ny fitsipi-pitenenana amin’ny tsipelina." Ity Boaty ity Dia tokony ho voamarikao mba haha​​fahanao mametaka antontan’isa.
Kitiho ny boaty "OK".
Ankehitriny、isaky ny manao fisavana tampoka ianao dia mahazoポップアップamin’ny faran’ny farany izay manome anao ny antontan’isa mora vakiana.
Ny fanamarinana ny haavo an’ny kilasin’i Flesch-Kincaid dia manazava tsara。 Ho hitanao amin’ny santionany etsy ambony fa ny soratra dia amin’ny 9.3 na volana fahatelo amin’ny taona fahasivy。 Mba haha​​zoana ny atiny ho amin’ny ambaratonga ambaratonga fahavalo、izay tiako、dia afaka manaisotra fotsiny ilay teny hoe "マハフィナリトラ" aho izay mitondra azy amin’ny isa 8.8.
Ankehitriny、ny fahatakarana ny isa amin’ny Flesch Reading dia somary sarotra、saingy tsy sarotra loatra。 NyマイクロソフトダイアマナザバアミンニアンティピリアンモンバIO